ခက်ဆစ်များ | FLEGT
CEEAC:Economic Community of Central African States ကို ကြည့်ပါ
Central African Forest Commission (COMIFAC): ဒေသတွင်း သစ်တောများ ရေရှည်တည်တံ့ရေးကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် Central Africa ရှိ နိုင်ငံတကာအစိုးရနှင့်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ COMIFAC တွင်ပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ် 10 ခုမှာ- Burundi, Cameroon, Chad, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Republic of the Congo, Rwanda and São Tomé နှင့် Príncipe တို့ဖြစ်သည်။ COMIFAC အား မတ်လ၊ 1999 ခုနှစ် ၌ the Declaration of Yaoundé တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ COMIFAC website.ကို ကြည့်ပါ။
CITES ပါမစ် - ကုန်သွယ်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အထား အတည်ပြုထားခြင်းများသည် Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) အောက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော လိုအပ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာသည်။ CITES ပါမစ်တစ်ခု ပူးတွဲပါသောသစ်အား EU Timber Regulation အောက်တွင် တရားဝင်အဖြစ် လက်ခံလိမ့်မည်။ လျှောက်ထားခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်သည့် The EUTR အတွက် သစ်ကို CITES ပါမစ်တစ်ခုဖြင့် လျှောက်ထားရန် မလိုအပ်ပါ။ CITES ခွင့်ပြုထားသော အမျိုးအစားများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင် CITES လက်မှတ်ကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည့်အတွက် FLEGT လိုင်စင်တစ်ခုအား လက်ခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အောက်ပါတို့တွင်လည်း ကြည့်နိုင်ပါသည်။ Convention on International Trade in Endangered Species
CITES: Convention on International Trade in Endangered Species ကိုကြည့်ပါ။
အခွင့်အာဏာရှိသော အာဏာပိုင်အဖွဲ့မှာ - The EU FLEGT Regulation အောက်တွင်၊ အမျိုးမျိုးသော FLEGT လိုင်စင်များအတွက် EU အဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်တစ်ခုစီအားဖြင့် ခန့်ထားပြီးဖြစ်သော အာဏာပိုင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်အဖွဲ့များ။ the EU Timber Regulation (EUTR) အောက်တွင်၊ အော်ပရေတာများဖြင့် လက်ခံခြင်းအား စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်နှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေသော အဖွဲ့အစည်းများအား ၎င်းတို့၏ တာဝန်များကို ကျေပွန်အောင် ဆောင်ရွက်နေခြင်းကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်၊ EU အဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ် တစ်ခုစီအားဖြင့် ခန့်အပ်ထားသော အာဏာပိုင်အဖွဲ့။ EU အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်အချို့တွင်၊ the EUTR အခွင့်အာဏာရှိသော အာဏာပိုင်အဖွဲ့များမှာ အကောက်ခွန် သို့မဟုတ် နယ်စပ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသော အခြားအာဏာပိုင်အဖွဲ့များ ဖြစ်သည်။ အခြားသော EU အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များတွင် ဤလုပ်ငန်းအား အခြားသော အစိုးရဌာနများသို့ တာဝန်ခွဲပေးထားသည်။ အခြားသော EU အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များတွင်၊ EUTR နှင့် FLEGT အခွင့်အာဏာရှိသော အာဏာပိုင်အဖွဲ့များသည် အလားတူ အဖွဲ့အစည်းများ (နှင့်လူများ) တွင်ပင်ရှိသည်။ FLEGT regulation list of competent authorities [PDF] နှင့် EU Timber Regulation list of competent authorities [PDF] ကိုကြည့်ပါ။
ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်သော သစ် - လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ကုန်သွယ်သော သစ်မှ၊ ဝင်ငွေများအား လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများအတွက် သုံးစွဲစေသည်။ The UN Security Council က “ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်သောသစ်” ဟူသော ဝေါဟာရကို 2004 ခုနှစ်၊ Resolution 1521 တွင် တီထွင်ခဲ့သည်။
Conformity assessment body (CAB): Conformity Assessment ဆိုသည်မှာ ထုတ်ကုန်များ၊ ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ စနစ်များ သို့မဟုတ် လူများအား သက်ဆိုင်သည့် စံတစ်ခု၏ သတ်မှတ်ချက်များရှိ၊မရှိ တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ VPA များတွင်၊ Conformity Assessment Body တစ်ခုသည် သစ်တရားဝင်မှု အာမခံစနစ်ဖြင့် လက်ခံသဘောတူမှု တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိနိုင်သည်။ Conformity assessment body တစ်ခုသည် သက်ဆိုင်သည့် စံနှုန်းများအား လိုက်နာစောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့်၊ ဖြစ်နိုင်ပါက ထိုစံနှုန်းများအား ဆန့်ကျင်သည့် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှုကို တောင်းခံခြင်းဖြင့်၊ သတ်မှတ်ထားသော သက်ဆိုင်သည့် ISO/IEC စံအဖြစ် သတ်မှတ်သော အထောက်အထားများတွင်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ထင်ရှားစေသည်။
Convention on International Trade in Endangered Species နိုင်ငံတကာအစိုးရနှင့်ဆိုင်သော သဘောတူညီချက်က၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့် အပင်များ၏ နမူနာများ ကုန်သွယ်မှုသည် အန္တရာယ်ရှိသောမျိုးစိတ်များ အန္တရာယ်မှ ခြိမ်းခြောက်မှု မဖြစ်စေကြောင်း သေချာစေသည်။ အောက်ပါတို့တွင်လည်း ကြည့်နိုင်ပါသည်။ CITES ပါမစ် -
ပြုပြင်ပေးသော အရေးယူဆောင်ရွက်မှု - VPA များတွင်၊ အရေးယူမှုတစ်ခုအား၊ တစ်ဦးချင်း လိုက်နာမှုမရှိခြင်း (များ)၊ သို့မဟုတ် တိုင်ဆိုင်စစ်ဆေးသည့် အေဂျင်စီများ သို့မဟုတ် ပြင်ပမှ သီးခြားစစ်ဆေးသူတို့အားဖြင့် အသိအမှတ်ပြုထားခြင်း ပျက်ကွက်သည့် စနစ်တို့ကို၊ ပြင်ဆင်ရန် သစ်တရားဝင် အာမခံစနစ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
DG DEVCO: Directorate-General for International Cooperation and Development ကိုကြည့်ပါ
DG ENV: Directorate-General for the Environment ကိုကြည့်ပါ
Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO):The European Commission ၏ Directorate-General က European နိုင်ငံတကာ ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု မူဝါဒကို ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဖော်ဆောင်ပေးခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိပြီး ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင် အကူအညီ အထောက်အပံ့ပေးနေပါသည်။ DG DEVCO သည် DG ENV နှင့်အတူရှိပြီး၊ EU FLEGT Action Plan ၏ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို ဦးဆောင်နေသည့် the Commission DG များအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားအဖွဲ့အစည်းများအကြား၊ DG DEVCO က African နိုင်ငံများနှင့်၊ Latin American နိုင်ငံအချို့တို့ဖြင့် VPA ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ဦးဆောင်နေပြီး၊ FLEGT ရည်မှန်းချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို အထောက်အကူပြုရန် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီကို ပြုလုပ်ပေးသည်။ DG DEVCO website ကိုကြည့်ပါ
Directorate-General for the Environment (DG ENV): The Directorate-General for Environment သည် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် EU မူဝါဒအတွက် တာဝန်ရှိသော European Commission ဌာနဖြစ်သည်။ ၎င်းက ယခုလက်ရှိနှင့် နောင်အနာဂတ် မျိုးဆက်များအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်၊ ထိန်းသိမ်း၊ တိုးတက်စေရန်အပြင်၊ အဆင့်မြင့် ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ခြင်းတစ်ခုကို သေချာစေပြီး၊ EU နိုင်ငံသားများ၏ ဘဝအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့် မူဝါဒများကို ကမ်းလှမ်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ကို ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းက Member States များ EU ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချနိုင်ရေးကို သေချာအောင် ပြုလုပ်ပေးပြီး၊ နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေးများ၌ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတွင် European Union ကိုလည်း ကိုယ်စားပြုသည်။ DG ENV သည် DG DEVCO နှင့်အတူရှိပြီး၊ EU FLEGT Action Plan ၏ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို ဦးဆောင်နေသည့် the Commission DG များအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ DG ENV website ကိုကြည့်ပါ
ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှု - US ဥပဒေအောက်၌၊ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှုတွင်၊ သူ သို့မဟုတ် သူမသည် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိကြောင်း သေချာစေရန်၊ အဆင့်အချို့ကို တာဝန်ယူမည့် လူတစ်ယောက် လိုအပ်သည်။ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှုတွင်၊ ဗဟုသုတနှင့် တာဝန်ယူမှု ပမာဏများ ကွဲပြားသည့်၊ အတန်းအစား မတူသော၊ လူများအား ခြားနားစွာ အသုံးချသည်။ due diligence system တွင်လည်း ကြည့်ပါ
Due diligence system: ၎င်းသည် EU စျေးကွက်ပေါ်တွင်၊ တရားမဝင်သည့် သစ် သို့မဟုတ် သစ်ထုတ်ကုန်များ ဝင်ရောက်လာခြင်း အန္တရာယ် အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် အသုံးချသော အော်ပရေတာများစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Due diligence system တစ်ခု၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်း သုံးခုမှာ - 1) သတင်းအချက်အလက် - အော်ပရေတာသည် သစ်နှင့် သစ်ထုတ်ကုန်များ၊ နိုင်ငံ သီးနှံအထွက်၊ အမျိုးအစား၊ အရေအတွက်၊ ပေးသွင်းသူ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် အမျိုးသားရေး ဥပဒေဖြင့် လေးစားလိုက်နာရန် အချက်များ၊ တို့ကို ဖော်ပြသည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ရရှိနိုင်ရမည်။ 2) အန္တရာယ် အကဲဖြတ်ခြင်း - အော်ပရေတာသည်၊ ထို သူ သို့မဟုတ် သူမ ပေးသွင်းသည့် ကွန်ယက်အတွင်း တရားမဝင် သစ်ဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်အား၊ အထက်ဖော်ပြပါ အတည်ပြုထားသော အချက်အလက်များပေါ် အခြေခံ၍၊ EU Timber Regulation ရည်ရွယ်ချက်တွင် ပါသည့် စံတို့ကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားခြင်းဖြင့်၊ ရယူသင့်သည်။ 3) အန္တရာယ် သက်သာစေခြင်း - အကဲဖြတ်ချက်တွင်၊ ပေးသွင်းသည့် ကွန်ယက်အတွင်း တရားမဝင်သစ် အန္တရာယ်တစ်ခု ရှိကြောင်း ပြနေသောအခါ၊ ပေးသွင်းသူထံမှ လိုအပ်သည့် နောက်ထပ် အချက်အလက်နှင့် အတည်ပြုချက်များအားဖြင့်၊ ထိုအန္တရာယ်အား သက်သာစေနိုင်သည်။
Due diligence: ကြည့်ပါ - Due diligence system:
ECCAS: Economic Community of Central African States ကို ကြည့်ပါ
Economic Community of Central African States (ECCAS, CEEAC): ECCAS သည် Central Africa ရှိ ဒေသဆိုင်ရာ စီးပွားရေး မြှင့်တင်ခြင်း ကော်ပိုရေးရှင်းအတွက် African Union ၏ စီးပွားရေး အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပေါင်းစုထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိစေရန်၊ ၎င်း၏ ပြည်သူများ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြှင့်တင်ပေးရန်နှင့်၊ သင့်မြတ်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေး တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ် 10 ခု ရှိသည် - Angola, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Gabon and São Tomé and Príncipe တို့ဖြစ်သည်။ Economic Community of Central African States website ကို ကြည့်ပါ
EU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ - ရှေးယခင်က European Commission ကိုယ်စားပြုခြင်းသည့် ယနေ့အခေါ် EU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များသည်၊ EU Embassies များအဖြစ် the European External Action Service အောက်တွင် ရှိပြီး၊ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ European Union ၏ သံတမန်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားပြုသူများ ဖြစ်ပါသည်။ EU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အများစုသည်၊ နိုင်ငံတစ်ခုချင်းဖြင့် EU အဆက်အသွယ်များအတွက် တာဝန်ရှိပြီး၊ အချို့က နိုင်ငံများအုပ်စုတစ်ခု သို့မဟုတ် ဒေသတစ်ခုဖြင့် အဆက်အသွယ်များအတွက် စီမံခန့်ခွဲ၍၊ အချို့က the African Union, ASEAN သို့မဟုတ် the United Nations တို့ကဲ့သို့ အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အခိုင်အမာဆောင်ရွက်သည်။ European External Action Service(EEAS) and theEEAS website.တွင်လည်း ကြည့်ပါ
EU FAO FLEGT Programme - 2012 နှင့် 2016 အကြား ကနဦး ငါးနှစ်ကာလတွင်၊ the EU FLEGT Action Plan ၏ ရည်မှန်းချက် လက္ခဏာများဖြစ်သည့် စီမံကိန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ရန် သစ်ထုတ်လုပ်နေသည့် နိုင်ငံများအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးသည်။ The EU FAO FLEGT Programme အား the European Union အားဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး၊ the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) အားဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို Programme သည် the ACP-FLEGT Support Programme (2008-2012) အား ဆက်ခံသည့် အစီအစဥ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ EU FAO FLEGT Programme website ကိုကြည့်ပါ
EU FLEGT Action Plan: The EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Action Plan သည် တရားမဝင် သစ်ခိုးထုတ်မှု ပြဿနာအပေါ် European Union ၏ တုံ့ပြန်ချက်ဖြစ်ပြီး၊ သစ်နှင့် သစ်ထုတ်ကုန်များ ကုန်သွယ်မှုတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်သည်။ 2003 ခုနှစ် EU အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များ၏ သဘောတူညီမှုဖြင့်၊ the EU FLEGT Action အစီအစဥ်က၊ ဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီရန် လက်လှမ်းမမီသည့် အဆင့်တွင်ရှိပြီး၊ သစ်တောအခန်းကဏ္ဍ ချုပ်ကိုင်မှု အားနည်းသည့်၊ နိုင်ငံများအတွက် ထုတ်ကုန်စျေးကွက်အား အထူးအရေးထားသည့် အနေဖြင့်၊ EU ၏ တာဝန်ကို အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ထို Plan တွင် သစ်တောထိန်းချုပ်မှု တိုးတက်စေရန် အမြင်ဖြင့် သစ်ထုတ်နေသည့် နိုင်ငံများဖြင့် ဆက်စပ် အလုပ်လုပ်ခြင်းတွင် EU ကို ချိတ်ဆက်ပေးရန်နှင့်၊ တရားမဝင်သော သစ်နှင့် သစ်ထုတ်ကုန်များ ကုန်သွယ်မှုကို လျော့ကျစေရန် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သည်။
EU FLEGT Facility: VPA များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် EU FLEGT Action Plan ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများအား ပံ့ပိုးပေးရန် EU မှ စတင်ထူထောင်ထားသည့် ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခြင်းအား လှူဒါန်းသူများစွာက ယုံကြည်ကြသည်။ The Facility အား 2007 တွင် the European Forest Institute ၌ စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ EU FLEGT Facility website တွင် ကြည့်ပါ
EU REDD Facility: သစ်တောများပြုန်းတီးခြင်းနှင့် သစ်တောပျက်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်စေသူများအား ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ရေရည်တည်တံ့နိုင်သော သစ်တော စီမံခန့်ခွဲမှုကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်၊ EU ၏ အားထုတ်ကြိုးပန်းမှုများအား အထောက်အကူပေးရန် EU အားဖြင့် လှူဒါန်းသူများစွာ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ထည့်ဝင် ရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ထောင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ The Facility အား 2010 တွင် the European Forest Institute ၌ စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ EU REDD Facility website တွင် ကြည့်ပါ
EU Timber Regulation (EUTR): Regulation (EU) No 995/2010 က၊ တရားမဝင် ခုတ်ယူထားသည့် သစ်နှင့် သစ်ထုတ်ကုန်များ ကုန်သွယ်မှုအား တုန့်ပြန်ရန်၊ သစ်နှင့် သစ်ထုတ်ကုန်များ စျေးကွက်တင်သည့်၊ အော်ပရေတာများ လိုက်နာရမည့် တာဝန်များကို ညွှန်ကြားထားသည်။ The European Union Timber Regulation (EUTR) သည်၊ ကမ္ဘာတဝှမ်း တရားမဝင် သစ်ခိုးထုတ်ခြင်း လျော့ပါးစေရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်သည့်၊ the EU’s FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) Action Plan ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ The EUTR သည် ၎င်းအား၊ EU စျေးကွက်ပေါ်တွင် တရားမဝင် ခုတ်ယူသည့် သစ်နှင့် သစ်ထုတ်ကုန်များအား ပထမဆုံးအကြိမ် ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရှိစေခဲ့သည်။ ထို့ပြင်၊ ပထမဆုံးအကြိမ်အတွက် စျေးကွက်ပေါ်တွင် သစ်နှင့် သစ်ထုတ်ကုန်များ နေရာယူမည့် အော်ပရေတာများသည်၊ ဤ တရားမဝင်ခုတ်ထားသော သစ်များအန္တရာယ်ကို သက်သာစေရန် ဂရုတစိုက် စစ်ဆေးခြင်းစနစ် ရှိရမည်။ The EU Timber Regulation သည် 3rd March 2013 ၌၊ စတင် အသက်ဝင်ခဲ့ပြီး၊ EU အဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်အားလုံးတွင် တိုက်ရိုက် အသုံးချနိုင်ခဲ့သည်။ European Commission’s EUTR ဝက်ဆိုက်.တွင်ကြည့်ပါ
European Commission (EC): EU ၏ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာရှိသော ပင်မအပိုင်းသည်၊ Europe ၏ အရေးကိစ္စများအား နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီ၏ အရေးကိစ္စများနှင့် ကွဲပြားလျက်) တစ်ခုလုံးအနေဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်။ ‘Commission’ ဟူသော ဝေါဟာရသည် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ အသင်းအဖွဲ့နှင့်၊ အဖွဲ့အစည်းကိုယ်တိုင်၊ နှစ်ခုစလုံးအတွက် ရည်ညွှန်းသည် - အဖွဲ့အစည်းကိုယ်တိုင် ဆိုသည်မှာ၊ Luxembourg ရှိ ရုံးခန်းများနှင့် Brussels နှင့် Belgium တို့တွင်ရှိသော ၎င်း၏ ရုံးချုပ်များကို ဆိုလိုသည်။ The Commission တွင် EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးက ‘ကိုယ်စားပြုခြင်းများ’ ဟု သိထားကြသော ရုံးခန်းများလည်း ရှိသည်။ European Commission website တွင်ကြည့်ပါ
European External Action Service (EEAS / EU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့) - The European Union ၏ သံတမန်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ၎င်းက EU ၏ နိုင်ငံခြားရေးရာ အကြီးအကဲအား ကူညီသည် - the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy - က the Union's Common Foreign and Security Policy အား ဆောင်ရွက်သည်။ EEAS ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ (EU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များဟု သိထားသည်) က ကမ္ဘာအနှံ့ ဆောင်ရွက်သည်။ EEAS ဝက်ဆိုက်. ကိုကြည့်ပါ
European Forest Institute (EFI): သစ်တောနှင့်ပတ်သက်သည့် ပြဿနာများအပေါ်တွင် သုတေသနပြုလုပ်ပြီး၊ အထောက်အကူပြုသည့် မူဝါဒကို ပံ့ပိုးပေးသည့် European ပြည်နယ်များအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ EFI သည် EU FLEGT နှင့် REDD ပံ့ပိုးမှုအင်္ဂါရပ်များကို စီစဥ်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ EFI ဝက်ဆိုက်. ကိုကြည့်ပါ
European Union (EU): European 28 နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီပွားရေးဆိုင်ရာ အသင်းဖြစ်သည်။ EU သည် supranational independent institutions ၏ စနစ်တစ်ခုနှင့် ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များအားဖြင့် နိုင်ငံတကာအစိုးရနှင့်ဆိုင်သော ညှိနှိုင်းထားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များမှတဆင့် စီမံဆောင်ရွက်သည်။ EU ဝက်ဆိုက်. ကိုကြည့်ပါ
FAO ACP FLEGT Programme: The Forest Law Enforcement, Governance နှင့် Trade Support for African, Caribbean and Pacific (ACP) နိုင်ငံများသည်၊ ACP အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများတွင် သစ်တောဥပဒေ လိုက်နာစေခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှု ပြဿနာများအား ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် 2008 နှင့် 2012 အကြား ကနဦး ငါးနှစ်တာ ကာလကို စတင်ခဲ့သည်။ ACP FLEGT FAO Programme အား European Commission အားဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး၊ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) အားဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Programme တွင် အဓိက အစိတ်အပိုင်း နှစ်ခု ရှိခဲ့သည် - ACP နိုင်ငံ အစုရှယ်ယာဝင် အဖွဲ့များအား the European Union (EU) Forest Law Enforcement၊ Governance နှင့် Trade (FLEGT) Action Plan အတွင်း လက်တွေ့အသုံးချနိုင်စေရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့်၊ အစုရှယ်ယာဝင် အဖွဲ့များအကြား သင်ယူလေ့လာထားသော သင်ခန်းစာများနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်သည့် FLEGT ၏ စုဆောင်းထားခြင်းများ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ဝါဒဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ 2012 တွင်၊ the ACP-FLEGT Support Programme အား ပိုကြီးသော EU FAO FLEGT Programme (2012-2016) ဖြင့် လိုက်နာစေခဲ့သည်။ EU FAO FLEGT Programme ကိုလည်းကြည့်ပါ
FLEGT Committee: the EU FLEGT Action Plan အောက်ရှိ European Union မူဝါဒများအား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသည့် ကော်မတီတစ်ခုဖြစ်သည်။ The European Commission က ကော်မတီအား ဦးဆောင်သည်။ FLEGT Committee အဖွဲ့ဝင်များသည် EU အဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်တစ်ခုစီကို ကိုယ်စားပြုသည်။
FLEGT လိုင်စင် - EU စျေးကွက်အတွက် လျာထားပြီးဖြစ်သော သစ် သို့မဟုတ် သစ်ထုတ်ကုန်များအတွက် VPA ပါတနာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက ထုတ်ပေးထားသည့် တင်ိပု့ခွင့်လိုင်စင်။ ထိုလိုင်စင်က တရားဝင်ဖြစ်သော လိုင်စင်အောက်တွင် တင်ပို့သော သစ် သို့မဟုတ် သစ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ဖော်ပြသည်။ FLEGT လိုင်စင်တစ်ခု ပူးတွဲပါသော သစ် သို့မဟုတ် သစ်ထုတ်ကုန်များအား EU Timber Regulation အောက်တွင် တရားဝင်အဖြစ် လက်ခံလိမ့်မည်။ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များသည် FLEGT လိုင်စင်ရှိသော သစ် သို့မဟုတ် သစ်ထုတ်ကုန်များအတွက် EUTR ဂရုတစိုက် စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ FLEGT-licensed timber ကိုလည်းကြည့်ပါ
FLEGT လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း စီမံချက် - VPA ပါတနာ နိုင်ငံတစ်ခုမှ The European Union သို့ ကုန်တင်ပို့ရန်အတွက် စီစဥ်ထားသော သစ် သို့မဟုတ် သစ်ထုတ်ကုန်များအတွက် လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်၊ နယ်စပ် ထိန်းချုပ်မှုများပေါ် အထောက်အပံ့ပေးခြင်းများအား လိုက်နာခြင်းဖြင့် The European Union တွင် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
FLEGT Regulation: The European Union အတွင်းသို့ သစ် တင်သွင်းကုန်များအတွက် FLEGT လိုင်စင်ပြုလုပ်ခြင်း စီမံချက်တစ်ခု စတင်ခြင်းတွင် EC Regulation No 2173/2005 The EU FLEGT Regulation သည် ထိုသစ်၏ တရားဝင်မှုအား အတည်ပြုရန် FLEGT လိုင်စင်တစ်ခုဖြင့် သစ်ကို ထုတ်ပေးထားသော ကုန်တင်သွင်းနေသည့် နိုင်ငံ မဟုတ်ပါက၊ EU ညှိနှိုင်းထားသော Voluntary Partnership Agreement (VPA) တစ်ခုဖြင့် နိုင်ငံများမှ EU အတွင်းသို့ သစ်နှင့် သစ်ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့ရန် ၎င်းအား တရားဝင်ဖြစ်စေသည်။ The EU FLEGT Regulation သည် EU ဖြင့် VPA သဘောတူညီချက်များ အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော ထုတ်လုပ်သူ နိုင်ငံများမှ တင်သွင်းသော သစ်နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ EU အဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်များသည် ဤ စည်းမျဥ်းအား အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပြည်တွင်း ဥပဒေကို လက်ခံ ထားပြီးဖြစ်သည်။ full text of the FLEGT Regulationကိုကြည့်ပါ
FLEGT:သစ်တော ဥပဒေ လိုက်နာစေခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှု၏ အတိုကောက်စာလုံးဖြစ်သည်။ ထိုဝေါဟာရသည် a) တရားမဝင် သစ်ခိုးထုတ်ခြင်းအတွက် EU ပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်သော - the EU Forest Law Enforcement Governance and Trade Action Plan; EU FLEGT Action Plan ကိုလည်းကြည့်ပါ) b) the EU FLEGT Action Plan ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် လှုပ်ရှားမှုများ သို့မဟုတ် c) The EU FLEGT Action Plan အဝန်းအဝိုင်း ပြင်ပနေရာများအပါအဝင်၊ သစ်တောဥပဒေ လိုက်နာစေခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်သော အခြားလှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။
Forest law enforcement, governance and trade (FLEGT): FLEGT ကိုကြည့်ပါ
Forest Stewardship Council: FSC ကိုကြည့်ပါ
FSC: The Forest Stewardship Council (FSC) သည် အမြတ်အစွန်းအတွက်မဟုတ်သော နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ၊ အစုရှယ်ယာဝင်များစွာ ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့သစ်တောများအတွက် အရေးကြီးသော ထိန်းချုပ်မှုများကို မြှင့်တင်ပေးရန် 1993 ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ရည်မှန်းချက် ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် အဓိက လက်နက်ကိရိယာများမှာ စံသတ်မှတ်ခြင်း၊ လက်ခံအတည်ပြုခြင်းနှင့် သစ်ထုတ်ကုန်များအား အမှတ်အသားပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Green public procurement: Public procurement ကိုကြည့်ပါ။
Harmonised System Nomenclature (HS Nomenclature): ကုန်သွယ်မှုပြုသော ထုတ်ကုန်များအား အတန်းအစားခွဲသည့် အမည်များနှင့် နံပါတ်များအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီစွာ စံကိုက်အောင်ပြုလုပ်သည့် စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ The HS nomenclature အား World Customs Organization ၏ ထောက်ခံကူညီအားပေးမှု အောက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ EU နှင့် ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များသည် The Convention on the Harmonized Commodity Description နှင့် Coding System အတွက် စာချုပ်ချုပ်ထားသော ပါတီများဖြစ်သည်။ The HS Nomenclature တွင် ကုန်ပစ္စည်း အုပ်စုပေါင်း 5000 ဖွဲ့စည်းပါဝင်သည်။ EU ၏ The Combined Nomenclature သည် HS Nomenclature နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး၊ နောက်ထပ် ဂဏန်း ရှစ်လုံး ထပ်ဆင့်ပိုင်းခြားထားသည့် နယ်မြေခွဲများနှင့်၊ Community ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ညွှန်းရန် တရားဝင် ရှင်းလင်းချက်များ ဖွဲ့စည်းပါဝင်သည်။ HS codes တွင်လည်းကြည့်ပါ
Joint implementation committee (JIC): VPA များတွင်၊ EU နှင့် ပါတနာနိုင်ငံ ပူးတွဲကော်မတီတစ်ခု၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ Agreement အကောင်အထည်ဖော်ြခင်းအား ကြီးကြပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကော်မတီတွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံရေးပိုင်ဆိုင်ရာ နှစ်ခုစလုံးနှင့်ပတ်သက်သော အစည်းအဝေးများရှိသည်။ ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များသည် EU သို့မဟုတ် VPA ပါတနာ နိုင်ငံအား ကိုယ်စားပြုသည်။ VPA တစ်ခုတွင်၊ ၎င်း၏ အဓိကစာသား သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုသည်၊ The Joint Implementation Committee မည်သို့ ဆောင်ရွက်သည်ကို ဖော်ပြသည်။ VPA ပါတနာနိုင်ငံအချို့တွင် The Joint Implementation Committee အတွက် အမည်ကွဲများရှိသည်။ Ghana တွင်၊ ဥပမာအနေဖြင့်၊ ပင်မအစိတ်အပိုင်းကို Joint Monitoring နှင့် Review Mechanism ဟု ခေါ်သည်။ Cameroon တွင်၊ ကော်မတီအား ပင်မအစိတ်အပိုင်း နှစ်ပိုင်း ထားရှိသည် - The Joint Monitoring Committee နှင့် The Joint Implementation Council တို့ဖြစ်သည်။
Legality အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် - VPA တစ်ခုစီအား ပါတနာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဥ်းများပေါ် အခြေခံ၍ ‘တရားဝင်သစ်’ ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်။ နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သော တရားဝင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် FLEGT လိုင်စင်တစ်ခု ထုတ်မပေးနိုင်မီ ရှိရမည်ဖြစ်သည့်၊ ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်ပြီး ထိန်းသိမ်းရန်အာဏာအပ်နှင်းထားသော၊ လိုအပ်ချက်များကို ရည်ရွယ်သည်။ ဥပဒေများသည် သစ်တော စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် သစ်လုပ်ငန်းစဥ်၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ရှုထောင့်များအား ခြုံငုံမိသည်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ထိုဥပဒေများအပေါ် လေးစားလိုက်နာခြင်းကို စစ်ဆေးရန် အသုံးပြုရသည့် ဆုံးဖြတ်ရန်မူနှင့် အညွှန်းများအားလည်း အထောက်အကူပြုသည်။ ထိုတရားဝင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် VPA သစ် တရားဝင်အာမခံစနစ်တစ်ခု၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ FLEGT အတိုချုပ်မှတ်ချက်2ကိုကြည့်ပါ တရားဝင် ထုတ်လုပ်သော သစ် ကိုလည်းကြည့်ပါ
တရားဝင် ထုတ်လုပ်သော သစ် - သစ်ခုတ်လှဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဥ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုပြုခြင်းများအား ထိုနိုင်ငံများရှိ ဥပဒေများနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ထားသည့် သစ် သို့မဟုတ် သစ်ထုတ်ကုန်များကို ဆိုလိုသည်။
လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း အခွင့်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ - FLEGT လိုင်စင်များအား အထောက်အထားခိုင်လုံစေရန်နှင့် ထုတ်ပေးရန် VPA ပါတနာ နိုင်ငံတစ်ခုအားဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော အာဏာပိုင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်အဖွဲ့များကို ဆိုလိုသည်။
သစ်လုံးများ ချရန်နေရာ - သစ်လုံးများချရန်နေရာတစ်ခုသည် သစ်လုံးများအား သစ်ကားတစ်စီးပေါ်သို့ မတင်မီ၊ လုပ်ငန်းစဥ်များ လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် သစ်လုံးများအား သပ်သပ်ရပ်ရပ် စုပုံခြင်းတို့အတွက် ဟင်းလင်းပြင် နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သစ်ခွဲစက်ရှိရာနေရာနှင့် သစ်ထားစရာနေရာ ရွေးချယ်ခွင့်များသည့် နေရာဖြစ်သည့် ခုတ်လှဲပြီးသစ်အများစု၏ ‘မျက်နှာစာ နေရာ’ ဖြစ်သည်။
စျေးကွက်တွင် ပါဝင်သူ - သစ်တောလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် သစ်ထုတ်ကုန်များ အသွင်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှု တို့နှင့် ပတ်သက်သော၊ အဓိကပါဝင်သူတစ်ဦး၊ တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း
အစုရှယ်ယာဝင်များ လုပ်ငန်းစဥ် - အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အားလုံးသဘောတူညီသည့် စည်းဝေးခြင်းမှတဆင့်၊ အဆင့်အားလုံး၌ ကြားသိပေါင်းစပ်ပေးထားသည့် တိကျသော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍၊ သက်ဆိုင်သော အဓိက ပါဝင်သူများ၏ အမြင်များကို သေချာစေခြင်းအားဖြင့်၊ ပိုကောင်းမွန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပေါ်ပေါက်စေရန် ပြည်သူ လူထုအသိုင်းအဝိုင်း၊ တစ်ဦးချင်း အခန်းကဏ္ဍ၊ လူထုအခန်းကဏ္ဍတို့တွင် ဆော်သြသိစေခြင်းတစ်ခု၊ ကိုဆိုလိုသည်။ ချဥ်းကပ်ပုံသည်၊ အဓိကပါဝင်သူများနှင့် အပြန်အလှန် အကျိုးအမြတ်များ ရှိစေသည့် ဖြေရှင်းနည်းများအကြား ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ထိုချဥ်းကပ်ခြင်းသည် လူအများအတွက်အဓိကနှင့် ရလဒ်အတွက် တာဝန်ယူရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် လူတိုင်းဖြစ်သည်။ ပါဝင်သူများအား ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ပြုထားပြီး အသုံးပြုသည့် ချဥ်းကပ်ပုံများကြောင့်၊ အစုရှယ်ယာဝင်များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရန်အတွက်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ပိုင်ရှင်အသွင် ခံစားမှုတစ်ခုကို ရရှိစေသည်။ ဤနည်းအတိုင်း ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သူတို့၏ လိုက်နာမှု ပိုအားကောင်းစေနိုင်သည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များ တွင်လည်းကြည့်ပါ။
ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သူ - The EU Timber Regulation အောက်တွင်၊ EU စျေးကွက်၌ သစ်နှင့် သစ်ထုတ်ကုန်များကို နေရာယူထားသည့်၊ လူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်သူ သို့မဟုတ် တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ် မည်သူမဆိုကို ဆိုလိုသည်။
PEFC: The Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) သည် အမြတ်အစွန်းအတွက် မဟုတ်သည့် ရေရှည် တည်တံ့သော သစ်တော စီမံထိန်းချုပ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအပြင်၊ သီးခြားအကဲဖြတ်ချက်၊ အတည်ပြုချက်နှင့် နိုင်ငံနှင့်ဆိုင်သော သစ်တော ခွင့်ပြုချက် စနစ်များအား နားလည်စေခြင်းတို့ကို မြှင့်တင်ပေးသည် နိုင်ငံတကာ အကာအကွယ်ပေးခြင်း အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - PEFC ကိုကြည့်ပါ
Public procurement policy: Public procurement ကိုကြည့်ပါ
Public procurement: အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့် ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား ဝယ်ယူရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ‘Green’ အများပြည်သူ ဝယ်ယူရရှိခြင်းဆိုသည်မှာ အများပြည်သူ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အဖွဲ့များအနေဖြင့် ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းများအား ဝယ်ယူရရှိရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်၊ အလားတူ ကြိုးပမ်းရယူကြသည့် အခြားနည်းများနှင့် နှိုင်းယှဥ်လျှင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော သက်ရောက်မှုများအား ဖြစ်စဥ်တလျောက် နည်းနိုင်သမျှ နည်းစေခြင်းဖြင့် ကြိုးပမ်းရယူသည့် ဖြစ်စဥ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အများပြည်သူ ဝယ်ယူရရှိခြင်းသည် EU FLEGT Action Plan ရှိ စီမံချက်များအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို Plan က၊ ဝယ်ယူရရှိခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်များတွင် သစ်များအား ရွေးချယ်သတ်မှတ်သည့်အခါ၊ တရားဥပဒေနှင့်အညီ မည်သို့ ရင်ဆိုင်သွားမည်ကို၊ EU အဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်များတွင်၊ စာချုပ် ချုပ်ထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အဖွဲ့များအား လမ်းညွှန်ပေးရန် ရည်ရွယ်သည်။
REDD+: United Nations မှ သစ်တောများအား ခုတ်လှဲသည်ထက် ပိုမိုတန်ဖိုးရှိသော တည်ရှိနေမှုကို ဖြစ်စေမည့် ရှုထောင့်ဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ REDD+ စနစ်အောက်တွင်၊ သစ်တောများ၏ ကာဘွန်ထိန်းသိမ်းထားခြင်း လုပ်ဆောင်မှုများအား တိုင်းတာချင့်ချိန်ပြီး၊ သစ်တောများ ရှိနေစေခြင်းအား မပြောင်းလဲအောင် ထိန်းသိမ်းရန် သို့မဟုတ် တိုးမြှင့်ပေးရန် အားပေးမှုများကို အထောက်အကူပေးရန်အတွက် ရန်ပုံငွေများ ရှာဖွေခဲ့သည်။
သစ်တောများပြုန်းတီးမှုနှင့် သစ်တောများအဆင့်နိမ့်ကျခြင်းကြောင့် ထုတ်လွှတ်ပေးခြင်းများ လျော့ကျသွားခြင်း REDD+ ကိုကြည့်ပါ။
Shipment: ကုန်သွယ်မှု၌၊ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ကုန်ပေးပို့ခြင်းတစ်ခုသည် သင်္ဘောပေါ် သို့မဟုတ် လေယာဥ်ပေါ်တွင် ပါသည့် ကုန်သေတ္တာများ၊ အထုတ်များ၊ သို့မဟုတ် အပိုင်းအစများ ပမာဏ သို့မဟုတ် အရေအတွက် မည်သည်တို့မဆို၏ ကုန်အသေးစိတ်စာရင်းတစ်ခုတွင် ဖော်ပြသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးရသော ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ VPA များတွင်၊ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုတစ်ခုသည် FLEGT လိုင်စင်တစ်ခုအားဖြင့် အကျုံးဝင်သော VPA ပါတနာ နိုင်ငံတစ်ခုမှ သစ် သို့မဟုတ် သစ်ထုတ်ကုန်များ၏ ပမာဏတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုတစ်ခုသည် ကုန်ပစ္စည်းများအား၊ ပေးပို့သူ သို့မဟုတ် လွှဲအပ်သူတစ်ဦးအားဖြင့်၊ VPA ပါတနာ နိုင်ငံတစ်ခုမှ ပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ EU စျေးကွက်တွင် လွတ်လပ်စွာ လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက်၊ EU အဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်တစ်ခု၏ အကောက်ခွန်ရုံးတစ်ခု၌ ပြသထားခြင်းဖြစ်သည်။ အချက်အလက်တွင် VPA များနှင့် FLEGT လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၏ အပိုင်း၌၊ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှု (Shipment) နှင့် ကုန်ပေးပို့ခြင်း (Consignment) သည် အဓိပ္ပါယ်တူဖြစ်သည်။ consignmentနှင့်shipment-based licensing တွင်လည်း ကြည့်ပါ
ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှု အခြေခံသည့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း - VPA များတွင်၊ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှု အခြေခံသည့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုသည်မှာ၊ EU သို့ တင်ပို့သော ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှု တစ်ခုစီအတွက်၊ VPA ပါတနာ နိုင်ငံ၏ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း အာဏာပိုင်အဖွဲ့အားဖြင့်၊ ထုတ်ပေးထားသော တရားဝင် အတည်ပြုဖော်ပြထားသည့် လိုင်စင်တစ်ခု ရှိသည့်နေရာရှိ လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်းစနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ shipment တွင်လည်းကြည့်ပါ။
အစုရှယ်ယာဝင် - လုပ်ငန်းစဥ်တစ်ခု သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရှိ အစုရှယ်ယာဝင်များဆိုသည်မှာ၊ ထိုလုပ်ငန်းစဥ် သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရရှိနိုင်သော သို့မဟုတ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ပေးနိုင်သော၊ လူများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတို့ ဖြစ်သည်။ သစ်တောများတွင် ဒေသတွင်းဆိုင်ရာ၊ အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ စနစ်များ၌၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် ယဥ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ တန်ဖိုးများစွာ ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် မည်သည့် သစ်တောမူဝါဒတွင်မဆို အစုရှယ်ယာဝင် အုပ်စုများစွာ ရှိလိမ့်မည်။ VPA များနှင့် စပ်လျဥ်း၍၊ သစ်တင်ပို့သည့် နိုင်ငံရှိ အစုရှယ်ယာဝင်များနှင့် EU တွင် အစိုးရများ၊ ကိုယ်ပိုင်ကဏ္ဍ ဆောင်ရွက်သူများ၊ ပြည်သူနှင့်ဆိုင်သော အသိုင်းအဝိုင်း အဖွဲ့အစည်းများ၊ အုပ်စုများ နှင့်/သို့မဟုတ် တိုင်းရင်း ပြည်သူများတို့ ပါဝင်သည်။ multistakeholder process တွင်လည်းကြည့်ပါ
ပေးသွင်းခြင်း ချိတ်ဆက် - သစ်ပေးသွင်းခြင်း ချိတ်ဆက်တစ်ခုသည် သစ်ခုတ်လှဲသည့်နေရာ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ နောက်ဆုံးရောင်းရန် တင်သွင်းသည့် နေရာမှ၊ သစ်နှင့် သစ်ထုတ်ကုန်များအား ပြောင်းရွှေ့ ပုံပြောင်းခြင်း ပြုလုပ်သည့်၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူများ၊ နည်းပညာ၊ လှုပ်ရှားမှုများ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် အရင်းအမြစ်များတို့၏ စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Sustainable forest management (SFM) - လက်ရှိနှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်များ၏ အကျိုးအမြတ်အတွက်၊ သစ်တောအမျိုးအစားအားလုံး၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးအား၊ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် တိုးမြှင့်ပေးရန် ရည်ရွယ်သည့် လှုပ်ရှားပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေသော အယူအဆ အမြင်သဘောထား တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
Timber legality assurance system (TLAS): VPA တစ်ခု၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်း - သစ်တရားဝင်အာမခံစနစ်သည်၊ VPA ပါတနာနိုင်ငံတစ်ခုအား၊ တရားဝင်သစ်ဆိုသည်ကို သတ်မှတ်ပေးရန်၊ သစ်ထုတ်ကုန်များကို ခုတ်လှဲ၊ သယ်ပို့၊ ကုန်သွယ်မှုတို့တွင် ဥပဒေနှင့်အညီ ပြုလုပ်ထားခြင်းရှိမရှိ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်၊ သစ်နှင့် သစ်ထုတ်ကုန်များအား မူရင်းနေရာမှ တင်ပို့မည့်နေရာအထိ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန်၊ EU သို့ တင်ပို့မည့် တရားဝင် အတည်ပြုထားသော သစ်ထုတ်ကုန်များအတွက် FLEGT လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးရန်နှင့်၊ ပြင်ပမှသီးခြား စစ်ဆေးခြင်းအတွက် စနစ်တစ်ခုလုံးအား မြင်သာအောင်ပြရန်တို့ကို ပြီးမြောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်မှုပြုသူ - The EU Timber Regulation အောက်တွင်၊ အတွင်းစျေးကွက်ပေါ်တွင် နေရာယူပြီးဖြစ်သော သစ် သို့မဟုတ် သစ်ထုတ်ကုန်များအား ရောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ခြင်းများပြုသည့်၊ သစ် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆိုင်သော လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု၏ လမ်းကြောင်းအတွင်း ရှိသည့်၊ လူမှန်နေရာမှန်သူ သို့မဟုတ် တရားဝင်ဖြစ်သူ မည်သူ့အားမဆိုကို ဆိုလိုသည်။
တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း - ဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီသော သစ်နှင့် သစ်ထုတ်ကုန်များဖြစ်စေခြင်း နည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ VPA များတွင်၊ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းက သစ်တရားဝင် အာမခံစနစ်တွင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသကဲ့သို့၊ တရားဝင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ပေးသွင်းခြင်း ချိတ်ဆက်ထိန်းချုပ်မှုများ၏ လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံကြောင်း ခိုင်မာစေသည်။ FLEGT အတိုချုပ်မှတ်ချက်5ကိုကြည့်ပါ။
Voluntary Partnership Agreement (VPA) - EU နှင့် EU ပြင်ပရှိ သစ်တင်ပို့နေသည့် နိုင်ငံတစ်ခုအကြား တရားဝင် ချည်နှောင်ထားသော နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ VPA တစ်ခုစီသည် EU သို့ ပါတနာ နိုင်ငံတစ်ခုမှ တင်သွင်းသော သစ်နှင့် သစ်ထုတ်ကုန်များသည် ထိုနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။
VPA ပါတနာ နိုင်ငံ - The European Union ဖြင့် Voluntary Partnership Agreement (VPA) တစ်ခုအား၊ ညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှုပြုရန်၊ စေ့စပ်ဆွေးနွေးခြင်းများအတွင်း ဝင်ရောက်လာသည့် မည်သည့် သစ်တင်သွင်းသည့် နိုင်ငံကိုမဆို ဆိုလိုသည်။